UkuBumba kweRabha yesiNtu kunye neRubber Mulch, eVulanisiweyo ngokwezifiso - uSanda
Sisebenza kunye nabathengi ukumisela ezona zisombululo zibalaseleyo zokubonelela ngeempawu ezisemgangathweni ezinamandla kunye neetyhubhu eziyilelwe ukujongana nemozulu embi, ingxolo egqithisileyo, ukungcangcazela okungafunekiyo kunye neminye imiba.
Ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo
I-Hangzhou Sanda Rubber kunye neplastiki yehardware Co., Ltd. eyasekwa ngo-1998. Ifumaneka eZhejiang, China.Sizinikela kuphando, kwimveliso kunye nasekuthengiseni kwi-EPDM, irabha yeNeoprene (CR), i-NR, i-PVC, i-NBR, i-TPE, irabha yesilic kunye neplastiki, kunye nezinye iimveliso, ezijolise ikakhulu kwimisebenzi emibini esisiseko. Ukutywina kunye nokothuka absoption.
Unokukhetha kuluhlu olubanzi lweemveliso
Irabha ebotshelelwe kwinyithi